I-White Duvet Cover yaMaqhekeza ama-3 asete ipateni yeconchi eprintiweyo eSoft Cotton Comforter Cover, China White Duvet Cover 3 Amaqhekeza asete ipateni yeconch eprintiweyo eSoft Cotton Comforter Cover Abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso-Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co.,Ltd
Inani Model: F29048
OKO UNOKUKUFUMANA】: AKUFAKI umthuthuzeli. Le yi-duvet COVER, sisiciko somthuthuzeli okanye seduvet. Kuya kufuneka ubeke eyakho i-duvet ngaphakathi ngokungathi ubeka umqamelo ngaphakathi komqamelo. Isembozo seDuvet sinokuvalwa kwe-zipper kunye namaqhina okukhusela ukufakwa.
US 【UKUSETYENZISWA KABANZI & NOKUCHAZA】: Ikhava nganye yeDuvet igqityiwe ngokuvalwa kwe-zipper, kwaye kulula ukuyisusa kwaye uyihlambe. Kukwakho namaqhina kwikona nganye yesembozo seduvet, umthuthuzeli wakho uya kuhlala endaweni entle kwikhava yetyuve. Umatshini onokuhlanjwa ngamanzi abandayo kwaye uwele ezantsi. Ukuphela, ibala, ukushwabana kunye nemibimbi enganyangekiyo.
Ukuba ufuna into enje ngeKrisimesi, uNyaka oMtsha, iiholide, isipho sokuzalwa kumama wakho, utata, udade, ubhuti, umakhulu, utatomkhulu, umfazi, umyeni, unyana, intombi nabo bonke abanye abantu obathandayo. , le seti yesembozo seduvet yinto entle kakhulu.
Igama lemveliso I-White Duvet Cover 3 Amaqhekeza eSeti yepateni eShicileleyo eSoft Cotton Comforter Cover